यि हुन नेपाली शोभराज, जसले ३२ महिलाको बलात्कार पश्चात हत्या
काठमाडौं - नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबीले) ३२ महिलाको हत्या गरी फरार रहेका नेपाली शोभराजलाई पक्राउ गरेको छ । ‘विकिनी किलर’ फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराज कै शैलिमा महिलाहरुको बलात्कारपछि हत्या गर्दै हिँड्ने ‘नेपाली शोभराज’ लाई सिआईबीले पक्राउ गरेको छ । प्रेम उपनामले चिनिने नेपाली शोभराजकोे नाममा मानबहादुर बुढाथोकी रहेको सिआईबीले जनाएको छ । प्रेमले करिब ३२ महिलाको बलात्कार पछि हत्या गरेको आशंकामा सिआईबीले अनुसन्धान…विस्तृत समाचार »
आमाको पेटमा स्पोर्ट्स कार ?
२ अषाढ २०७३
भारतको नयाादिल्लीमा एउटा आमाको कोखमा बच्चाको सट्टा स्पोर्ट्स कार भेटिएको छ । ती महिलाका पतिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हालेपछि घटना बाहिर आएको हो । भारतीय अनलाइन अमर उजालाका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि यी दम्पत्ति बच्चाको आशमा थिए । पत्नीले वाइवीएफ पद्धतिमार्फत छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । छोरी ६ महिना हुादा उनी फेरि गर्भवती बनेकी थिइन् । यी दम्पत्तिले पेटमा छोरा छ कि छोरी भनेर हेर्न…विस्तृत समाचार »
आइफोन किन्न १८ दिनकी छोरी बिक्री !
चीनमा एक व्यक्तिलाई आफ्नै १८ दिनकी छोरी बेचेको आरोपमा ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । अदालतले आइफोन किन्नका लागि आफ्नै छोरी बेच्ने बाबुलाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो । एक चिनियाँ दम्पतीले आईफोन किन्नका लागि आफ्नी १८ दिनकी छोरीलाई ३ हजार ५ सय ३० डलरमा बेचेका थिए । चीनको सरकारी पीपुल्स डेलीको अनलाइनको एक रिपोर्टमा चीनको फूजियान प्रान्तमा एक सामाजिक सञ्जाल क्युक्युमा १८…विस्तृत समाचार »
रक्सीको नशामा सिंहसँग हात मिलाउन गएपछि
यो दुनियाका कोही मानिस विचित्रकै हुन्छन् । केही समय पहिले भारतमा एकजना जँड्याहासँग हात्ति डराएर भागेको र जँड्याहाले जंगली हात्तिलाई लखेटेको समाचार आएको थियो । दक्षिण अमेरिकी देश चिलीमा आत्महत्या गर्नका लागि एक युवकल नांगै चिडियाखानाको सिंहको खोरमा हाम फाल्दा दुइवटा सिंहलार्य नै गोली हान्नुपरेको समाचार हिजो मात्र अनलाइन खबरमा पढ्नुभएकै छ । अहिले फेरि अर्को यस्तै खबर आएको छ । भारतको हैदरावादस्थित नेहरु चिडियाखानमा…विस्तृत समाचार »
२४ भाद्र २०७१
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दायाँ हात सुन्निने समस्या नरोकिएपछि फलोअप उपचारका लागि एक-दुई दिनभित्रै बैंकक जाने तयारी भएको छ । उनी विदेश गएका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एमालेको कार्यबाहक अध्यक्ष बन्नेछन् । ओलीनिकट स्रोतका अनुसार हातमा संक्रमण बढ्दै गएकाले उपचारका लागि जानुपर्ने अवस्था आएको हो । शुरुमा कोरिया जानेबारेमा कुरा उठे पनि बैंकक नै जाने तय भएको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्ष ओली पूरा…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer23 4